Isisombululo samanzi se-Boiler-iShanghai BOQU Instrument Co., Ltd.
6.1 Ukucocwa kwenkunkuma
Ngophuhliso loqoqosho, ukwanda kwabemi basezidolophini kunye nokuphuculwa kwemigangatho yokuphila, inkunkuma yasekhaya nayo iyanda ngokukhawuleza. Ukurhangqwa kwenkunkuma kube yeyona ngxaki iphambili ekuhlaleni echaphazela imeko-bume yendalo. Ngokwezibalo, isibini kwisithathu sezixeko ezikhulu kunye neziphakathi zeli lizwe zingqongwe yinkunkuma, kwaye isiqingatha sezixeko asinazo iindawo ezifanelekileyo zokugcina inkunkuma. Indawo yomhlaba ehlala iimfumba zelizwe imalunga ne-500 yezigidi zeemitha zesikwere, kwaye isixa esipheleleyo somnye nomnye sifikelele ngaphezulu kweetoni ezibhiliyoni ezisixhenxe kule minyaka idlulileyo, kwaye isixa esivelisiweyo siyanda ngereyithi yonyaka eyi-8.98%.
Ibhoyila ngumthombo obalulekileyo wamandla kunyango lwenkunkuma eqinileyo, kwaye ukubaluleka kwamanzi okubilisa kwibhoyila kuyabonakala. Njengomenzi onikezelwe kwimveliso kunye nophando kunye nophuhliso lweempawu zokuchongwa komgangatho wamanzi, i-BOQU Instrument ibibandakanyeke kakhulu kushishino lwamandla ngaphezulu kweminyaka elishumi, iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu ekufumanekeni komgangatho wamanzi kwibhoyila amanzi, umphunga kunye nesampulu yamanzi. Iiraki.
Ngexesha lenkqubo yebhoyila, zeziphi iiparameter ekufuneka zivavanyiwe? Jonga apha ngezantsi uluhlu lwesalathiso.
Uthotho No. Inkqubo yokubeka iliso Imilinganiselo yokujonga Umzekelo weBOQU
Amanzi okubilisa amanzi abilayo pH, DO, Ukuqhuba I-PHG-2091XInja-2080X, I-DDG-2080X
Amanzi abilayo pH, ukuqhuba I-PHG-2091X, I-DDG-2080X
Umphunga ozalisiweyo Ukuqhuba I-DDG-2080X
Umphunga oshushu kakhulu Ukuqhuba I-DDG-2080X
6.2 Indawo yokuvelisa umbane
Ubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu lweesampulu zamanzi zomphunga eziveliswa zizibilisa kwizityalo zamandla obushushu kufuneka zivavanywe ngokuqhubekayo kumgangatho wamanzi ngokuqhubekayo. Ezona zikhombisi ziphambili ze-pH, i-conductivity, i-oksijini echithakeleyo, ukulandelela i-silicon, kunye nesodium. Isixhobo sohlalutyo lomgangatho wamanzi esibonelelwe yi-BOQU sinokusetyenziswa ekubekeni iliso kwizalathi eziqhelekileyo kumanzi abilayo.
Ukongeza kwizixhobo zokubeka iliso kumgangatho wamanzi, sinokubonelela ngeNkqubo yokuHlaziya iSteam kunye naManzi, enokupholisa ubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu lwesampulu yamanzi kunye nomphunga ukunciphisa ubushushu kunye noxinzelelo. Iisampulu zamanzi ezicutshungulweyo zifikelela kubushushu besixhobo kwaye zinokubeka iliso ngokuqhubekayo.
I-PHG-3081 I-pH Analyzer ekwi-Intanethi
PH8022 Inzwa ye-pH ekwi-Intanethi
I-DDG-3080 Imitha yokuqhuba kwi-Intanethi
I-DDG-0.01 Isinxibelelanisi sokwenziwa kwe-Intanethi kwi-0 ~ 20us / cm
INJA-3082 Imitha ye-Oxygen ekwi-Intanethi
YINJA-208F Iklasi ye-PPB ekwi-Intanethi ye-Oxygen sensor